အလှအပဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ - Bezzia | Bezzia
အထူးနေ့တစ်နေ့တွင်မိတ်ကပ်လိမ်းရန်သင့်တွင်အကြံဥာဏ်မရှိဟုသင်ခံစားဖူးသလော။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအချိန်များအတွက်အနည်းငယ်အကူအညီလိုသည်၊ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မဂ္ဂဇင်း၌သင်အားလုံးကိုသင်သိစေချင်သည် အလှတရားအကြံပေးချက်များ သင်၏ attribute များကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဤလိုင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပေါင်းစပ်မှုကိုကူညီလိမ့်မည် မိတ်ကပ်သေံ နှုတ်ခမ်းနှင့်မျက်နှာ၊ အရေပြားပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များကိုဖုံးအုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင်အမြဲလိုချင်သည့်အတိုင်းသင်၏ဆံပင်ကိုအရွက်ထားသောအလှအပထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။
၏အထွေထွေလိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့ အလှအပအမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိအမျိုးသမီးများအတွက်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပြသပါမည်။ မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ အရေပြားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ မျက်နှာအရေပြားလိမ်းဆေး၊ သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်။ နှုတ်ခမ်းနီ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်အတွက် အသားအရေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ။
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် .
အစွမ်းထက်မိတ်ကပ်မလိမ်းမီ အသားအရေကို ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်တစ်ခုအတွက် အောင်မြင်မှု၏ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အားဖြင့်…
Chia အစေ့များသည် ခေတ်ဆန်သော စူပါအစားအစာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လုံးဝကို တည်ထောင်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတာ သံသယရှိစရာပါပဲ..။
အိမ်မှာ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲပြီး အမှားအယွင်းမလုပ်မိအောင် ကျွမ်းကျင်လက်ထဲက လှည့်ကွက်အချို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အိမ်မှာ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ အလှပြင်နည်း ၅ မျိုး
ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်၏ ဂျယ်လ်သည် ကျန်းမာရေးနှင့် နယ်ပယ်များစွာတွင် အစွမ်းထက်သော မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းရာသီမှာမျက်နှာအတွက်ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက် ၄ ချက်
ဆောင်း ဦး ပေါက်ရောက်လာတာနဲ့မင်းရဲ့မျက်နှာထိန်းသိမ်းမှုပုံစံကိုပြောင်းဖို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ အပူချိန်အပြောင်းအလဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ...
သင့်အသားအရေအတွက်နှင်းဆီရေရဲ့အကျိုးကျေးဇူး ၄ ချက်
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
por စူစန်နာ Garcia က လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .